Maydad hore leh oo Maanta la soo Dhigay Laamiyada Caasimadda Burundi – Radio Daljir
Maydad hore leh oo Maanta la soo Dhigay Laamiyada Caasimadda Burundi
Diseembar 12, 2015 8:50 b 0
Somalia, December 12, 2015-(Daljir)_Maydadka 34-qof ayaa maanta oo Sabti ah laga helay waddooyinka magaalada Bujumbura ee caasimadda Burundi, kuwaasoo la sheegay in lagu dilay toogasho, kaddib dagaallo 24-saac oo dagaallo ay ka socdeen Bujumbura.
Wariyeyaal ku sugan caasimadda Burundi ayaa sheegay inay arkeen maydadka 21-ruux oo yaalla waddo marta degmo ka tirsan Bujumbura, sidoo kalena saraakiil ka tirsan dowladda dalkaas ayaa sheegay iyaguna in maydadka 13-ruux oo kale lagu arkay degmooyin kale.
Maydadka dadkaan ayaa la sheegay inay u badan yihiin dhallinyaro la toogtay, kuwaasoo qaarkood ay gacmaha ka xirnaayeen. Iyadoo maydadka lagu arkay magaalada Bujumbura ay imaanayaa xilli maalin ka hor la weeraray saddex saldhig oo ay lahaayeen ciidamada millateriga Burundi.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in maydadka intooda badan laga helay Nyakabiga oo ah degmo ay ku badan yihiin xoogagga xukuumadda kasoo horjeeda, inkastoo aan la sheegin cidda dilkooda ka dambeysa, balse waxaa lagu eedeeyay dilkooda ciidamada dowladda.
Degmada Musaga oo ku taalla Koonfurta Bujumbura ayaa iyana waxaa laga helay iyadana maydad kale oo fara badan, halka maydadka qaarkoodna lagu arkay degmooyin kale oo ka tirsan Bujumbura.
Shacabka ku nool degmooyinka inta badan maydadkan laga helay ayaa millateriga Burundi iyo booliiska ku eedeeyay inay dileen dhallinyaradan maydadkooda laga helay caasimadda Burundi, kaddib baritaanno guri-guri ah oo ay ciidanku shalay ka sameeyeen degmooyinka magaaladaas.
Balse, afhayeenka booliiska Burundi oo la hadlay Reuters, ayaa sheegay in dadkan la dilay ay ahaayeen kooxihii hubeysnaa ee weerarrada la beegsaday saldhigyada ciidamada dalka Burundi ay ku leeyihiin duleedka magaalada Bujumbura.
Caasimadda dalka Burundi ee Bujumbura ayaa waxaa tan iyo bishii Abriil ee sannadkan ka socday rabshado iyo iska-horimaadyo ciidamada iyo kooxo dibadbaxayaal ah u dhexeeyay, kuwaasoo ka dhashay go’aankii uu mar saddexaad ugu tartamayay madaxweynaha dalkaas xilka madaxnimo ee Burundi.
Barlamaanka Somalia oo Shir ku Yeelanaya Xamar